Ny fahasamihafan'ny tarehin'i Apple amin'ny tarika kambana? Mety tsy | Vaovao momba ny gadget
Ny fahasamihafan'ny tarehin'i Apple amin'ny tarika kambana? Tsia angamba
Ny Face ID izay nampidirin'i Apple tao amin'ny iPhone X dia mety ho iray amin'ireo haitao biometrika farany manazava Tao anatin'izay taona faramparany izay, na izany aza, ny tena manadio teknolojia dia mbola afaka mieritreritra fa faly isika amin'ny fomba fiasan'ny mpamaky ny dian-tànana ary angamba fotoana tokony hametrahana frein kely amin'ireo karazana fanavaozana ireo.
Na izany na tsy izany Nampanantena anay i Apple tamin'ny famelabelarana fa ny Face ID dia tena marina ary azo antoka fa afaka hanavaka na dia eo amin'ny samy mpirahalahy kambana aza ... ... marina ve izany? Andao hojerentsika ny fihetsiky ny Face ID rehefa manokatra ny terminal amin'ny fampiasana mpirahalahy roa kambana.
Na dia marina aza fa afaka nanamarina izahay fa ny Face ID dia mahay mamantatra anao amin'ny kojakoja marobe eo an-doha toy ny satroka, solomaso ary karazana derivatives hafa. izay mamela antsika ho marika tsara amin'ny asa mafy napetrak'i Apple ao aoriany. Ao amin'ny Reddit, ilay toerana misy ny fampahalalana tato ho ato, nisy kambana roa lahy nampakatra horonantsary nanandramana ny Face ID izay avelanay anao. ITY FIAINANA ity mba ho hitan'ny masonao ihany izany, ary toa tsy marina araka ny nampanantenain'izy ireo ny iPhone X sy ny ID famantarana azy.
Eo anelanelan'ny 46 sy 57 segondra dia hitantsika ny fandavan'ny Face ID hamoha rehefa manala ny solomasony ilay mirahalahy kambana, fa raha vantany vao mametraka azy ireo izy, dia mamoha mora foana eo amin'ny samy mpampiasa., eritreretinay satria ny fananana solomaso eo anelanelany dia mampiasa teboka fanamafisana vitsy kokoa hamaritana hoe iza no mpampiasa. Toa tsy dia milamina toy ny toa azy ny ID amin'ny tarehy, farafaharatsiny eo amin'ny samy kambana ... azonao atokisana ny rahalahinao ve?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny fahasamihafan'ny tarehin'i Apple amin'ny tarika kambana? Tsia angamba
Adriatika dia hoy izy:
Alohan'ny hamoahana ny vaovao dia tokony hampahafantatra tsara ny tenanao ianao. Raha mamaky ireo fanehoan-kevitra ao amin'ny reddit ianao, dia ho hitanao fa manazava ny fomba hitondrany azy ny mpanoratra. Tsy fahombiazana amin'ny fanekena ny Face ID izany, fa momba ny ianaran'ny Face ID amin'ny fiovana amin'ny tavanao.
Heveriko fa tokony hanavao ny vaovao ianao mba hialana amin'ny fikorontanana.
Valiny tamin'i Adria
«Bihometric» ????? Andriamanitra, tsy misy interleaved
Bitcoin, inona izany, ahoana ny asany ary aiza no ividianana Bitcoins
Intel dia mampiseho amintsika ny processeur vaovao 17-qubit ho an'ny fandaharam-pianarana kuantum